सबैलाई पारे अचम्ममा पारेर टुप्पीले कार घिसार्ने चितवनका गोर्खे दाइ, हेर्नुहोस !
पर्यटकिय क्षेत्रमा लागेसँगै स्पेन आइस्ल्याण्ड बाट आएका युवती हरुले कतिको बलियो हुन्छ गोर्खे दाईको टुप्पी भनेर परिक्षण गरेसँगै आफूले पनि त्यहि बेलाबाट प्रभावित भएर यो कार्यमा लागेको उनको भनाई छ ।
अधिकारीले अहिले सम्म कसैले पनि टुप्पीबाट गाडी तानेको रेकर्ड राखेका छैनन् भने गिनिज बुक अफ वल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम दर्ता गराउने चाहाना भएको बताउछन् । आफुले गाडी तान्न भने हालसालै बाट थालेको र तान्छु भन्ने योजना नै बनाएको चै तीन वर्ष भएको उनको भनाई छ ।
अधिकारीको कला टुप्पीले गाडी तान्नेमा मात्र सिमित छैन । उनि जनावर देखि चराचुरुडगीको आवाज समेत निकाल्न सक्छन् । बाख्रा कराउने देखि कागको आवाज निकाल्न सक्ने उनको गलाको पनि कला छ ।
यो भिडियो नेपाल प्रेस युटुब च्यानलमा छ!
२०७८ आश्विन १४, बिहीबार १२:३५0Minutes 229 Views